Kungani Kufanele Vikela Iwebhusayithi Yakho unesitifiketi se-SSL kusuka kwa-Semalt
Ukucabanga ngazo zonke izindlela ongaqinisa ngazo inani le-SEO kuwebhusayithi yakho? Ngenkathi siqinisekile ukuthi kufanele ukuthi ubambe zonke izithelo ezilengiswe phansi, kukhona into eyodwa evame ukuphambaniswa. Futhi lokho ukubethelwa kwedatha yewebhusayithi.
Ngamanye amagama, ukufakwa kwesitifiketi se-SSL kuwebhusayithi yakho okuthuthukisa ukuxhumana okuphephile, okufihliwe kubasebenzisi bakho nedatha yabo. NgoSemalt, ungaqinisekisa ukuthi konke ukuxhumana kwiwebhusayithi yakho kubethelwe futhi kuvikelekile. Izitifiketi zethu ezingabizi kakhulu ze-SSL zisetshenziswa kabanzi kuwo wonke amawebhusayithi azenza ziphephe kakhulu, zinobungane be-Google, futhi zithandwe
Ukuba nokubethela okuqinile kwe-HTTPS kungaba yindlela enhle yokuthatha izinga le-SEO lewebhusayithi yakho libe notch eliphakeme emehlweni ezinjini zokusesha. Ikakhulu uma iwebhusayithi yakho isebenza ngezinkokhelo (isib: inqola yokuthenga).
Ake sibheke kabanzi ukuthi kungani i-SSL iyinto ebalulekile kuma-SEO ngonyaka ka-2020 nangale kwalokho.
Siyini isitifiketi se-SSL?
Ngaphambi kokuthi singene emihlanganweni, ake siqonde kuqala ukuthi siyini isitifiketi se-SSL. Uma umusha kumawebhusayithi, umbuzo oyisisekelo kungaba ukuthi: kuyini ukubethela iwebhusayithi? Noma, kusho ukuthini ukuthi i-HTTPS?
Impendulo ilula. I-SSL, emele iSecurity Sockets Layer, iyisivumelwano sokuphepha se-inthanethi esivumela ukubethelwa kwedatha, ubuqiniso, kanye nobuqotho bedatha kumawebhusayithi anamuhla. Iguqula iphrothokholi ejwayelekile yokudlulisa i-hyperocol (HTTP) ibe yovikelekile (i-HTTPS), inikeze ukuvikelwa kwedatha yakho nokwethembeka kubasebenzisi bakho. Noma yiluphi ucezu lolwazi olungena kuseva yewebhusayithi yakho lubethelwe ukuze lungabanjwa noma luphazamiswe lapho kuhanjiswa.
I-SSL ingafakwa kuwebhusayithi njengesitifiketi (okuyinhlanganisela yamakhodi) ekhiqizwa ngumhlinzeki onjengeSemalt. Lesi sitifiketi se-SSL sibhala yonke imininingwane engena futhi iphume kuwebhusayithi yakho. Kwenza lokhu ikakhulukazi ngezenzo ezintathu:
Iqala inqubo yokufakazela ubuqiniso phakathi kwamadivayisi (ikhompyutha yakho neseva) ukuqinisekisa ukuthi lawa madivayisi yilokho abathi bayikho
Nge-Digitally sayina idatha yokuhlonza kangcono kulezi zinhlangothi zombili.
Ekuvikelekeni okuku-inthanethi, igama lobuchwepheshe le-SSL yi-TLS, emele Ezokuphepha Ungqimba Lokuphepha. Ingumlandeli we-protocol yasekuqaleni ye-SSL 3.0 eyasungulwa ngonyaka we-1996. Namuhla, yaziwa kangcono ngokuthi ukubethelwa kwe-SSL / TSL. I-Google iyathanda ukuyibiza nge-HTTP nge-TLS noma nge-HTTPS kuphela.
Isibonelo, lapho umsebenzisi evakashela iwebhusayithi yakho bese engena imininingwane yekhadi lakho lesikweletu ekhasini lokuphuma, leyo datha kufanele ifakwe ngemfihlo. Ngesitifiketi se-SSL, ungaqinisekisa ukuthi kunjalo. Lokhu kuvikela imininingwane yakho ebalulekile yomsebenzisi kanye namaphrojekthi iwebhusayithi yakho athembekile. Ukwenza abasebenzisi bakho babuye baphinde baphinde basebenzisane futhi ngokuzayo.
Lesi sitifiketi se-SSL futhi sinikeza uphawu lokhiye oluhlaza ekuqaleni kwe-URL kuGoogle Chrome nakuMozilla Firefox. Kusukela ekuqaleni kwethu, uSemalt useke wasebenzisa amakhulukhulu amaklayenti emhlabeni wonke. Wonke amaklayenti ethu ancike kolunye lwezinhlelo ezintathu zesitifiketi se-SSL esinikezayo. Iphakheji le-Premium (elibuye lisekele isizinda) ngokwemvelo lingabathengisi bethu abakhulu phakathi nokunikezwa kwesitifiketi se-SSL / TSL.
Kuyasisiza ukuthi abasebenzi bakwaSemalt bazi izilimi eziningana ezifana nesiNgisi, isiFulentshi, isiRussia, isi-Ukraine, isiNtaliyane, isiTurkey phakathi kwezinye. Lokhu kusiza ekuxhumaneni okungcono futhi kusisiza ukuthi sinikeze izinsizakalo ezinhle kakhulu kubasebenzisi bethu.
Umdwebo 1 - Uphawu oluphephile ku-Google Chrome
Manje njengoba unombono olungile wokuthi ukufihlwa kwemfihlo kungakwenzani kuwebhusayithi yakho nezivakashi zakho zewebhu, asibheke kusukela ekhoneni le-SEO.
Kungani Isitifiketi se-SSL sibalulekile kuma-SEO akho wewebhusayithi?
KwaSemalt, ngokuba ngumhlinzeki wezinsizakalo ze-premium SEO kanye ne-ejensi yokumaketha yedijithali ephelele, sihlonipha kakhulu imikhiqizo yezokuphepha. Ukunikezwa kwethu kwesitifiketi se-SSL kungenye yazo, engakusiza ukukhuthaza i-SEO kuwebhusayithi yakho.
Sesifundile ukuthi kungenzeka ukuba khona kwesitifiketi se-SSL / TSL kuwebhusayithi yakho kungaba yisibusiso kuwe. Ngeke ivikele iwebhusayithi yakho njengebhizinisi elivikelekile kuphela kepha izovikela nemininingwane yabasebenzisi bakho. Kepha ngaphezu kwalokho, kuzosiza emizamweni yakho yenjini yokucinga (i-SEO). Ake sibheke ukuthi kanjani.
Ngo-2014, i- Google imemezele ukuthi izoqala ukubheka ukuxhumeka 'okuphephile, okubhaliwe njengesiginali kuma-algorithms aso wokucinga'. Ngaphezu kweminyaka eyisithupha kusukela ngaleso sikhathi, iGoogle ikhuphule isisindo sayo ekubetheleni kwe-SSL / TSL kangangokuba namhlanje ithinta kakhulu imibuzo yokucinga, futhi ikakhulukazi lokho kuncike ekuthengeni kwezezimali. Amasayithi we-ecommerce, amasango okukhokha, kanye nezinkundla zokuxhumana nabantu bayizibonelo zezinhlobo zewebhusayithi ezidinga ukubethelwa. Lokhu kungenxa yokuthi basebenzisana nemininingwane yomuntu siqu efana nemininingwane yamakhadi esikweletu, izinombolo zokuphepha zenhlalo nemininingwane yomuntu uqobo. Isibonelo, uma unebhizinisi lakho elidonsayo, i-SSL kufanele ibe ngaphezulu kohlu lwakho lokuhlola lwe-SEO.
Ezinye izinjini zokucinga ezifana ne-Bing ne-Yandex nazo seziqalile ukusebenzisa ukubethela iwebhusayithi njengesiginali ejwayelekile yokuma okungcono.
Ngokombiko we-Transparency Report we-Google , ama-88% amakhasi e-webhu alayishwe ku-Google Chrome emhlabeni jikelele (ngeWindows desktop) ngo-Ephreli 2020 abethelwe nge-HTTPS. Le yinombolo enkulu ngoba i-Chrome isenokwabelana okungaphezulu kakhulu (futhi okukhulu) phakathi kweziphequluli zewebhu.
Umdwebo 2 - Amaphesenti wamakhasi alayishwe ngaphezulu kwe-HTTPS ku-Chrome
Umbiko ofanayo uphakamisa ukuthi amadivayisi eselula aphatha iningi lomsebenzisi ongabhaliswanga traffic. Lokhu kukhombisa ukuthi kunendawo eyanele yokwenza ngcono amawebhusayithi asizungezile. Ingabe ungomunye wabo?
Kulokho, nazi izikhombisi ezivela kuGoogle zokuthi kungani i-HTTPS ibalulekile:
Ivikela izivikeli zamehlo nabaduni
Vikela ukuhlaselwa kwe-cyber
Kuthuthukisa ukuthembeka kwedatha
Isebenza njengohlelo oluzimele lokuphepha noma ngabe ukuphepha kwesoftware nokusebenza kwehadiware kunganele
Iwebhusayithi enezinjini zokusesha ze-SSL / TSL isayina izinjini zokuthi ithatha imininingwane yomsebenzisi nobuqotho bedatha. Kanye nezinye izinto ezinjengokuqukethwe okufanele, isilo sokuqukethwe, ukuxhumana okuqinile kwangaphakathi, ne-backlinks enegunya eliphakeme, ukubethela kubuye kwavela njengesici esibalulekile sokwenza ngcono i-SEO.
Njengoba usuvele uyazi, i-SEO imayelana nokwenza ngcono ukubonakala kwewebhusayithi yakho kusesho lwezinto eziphilayo. Nge-encryption njengento ebalulekile, ungamane ufake isitifiketi se-SSL ngemali encane bese uphawuleka esixukwini samawebhusayithi angabhaliwe, angewona ama-HTTPS laphaya.
Ngabe i-HTTPS ingayithuthukisa kanjani i-SEO?
Uma ungumthengisi we-inthanethi, usuvele uyazi ukuthi asikho isenzo esinomthelela osheshayo ku-SEO. Ungakwengeza konke okuqukethwe kwewebhusayithi yakho futhi ubonise imephu yekhasi ngalinye ekhasini elithile elifanele. Futhi izinjini zokucinga zisazothatha isikhathi ukuphinda ziveze i-index, i-cache, futhi zibheke amakhasi akho wewebhu ukuthola amazinga angcono.
Kuyaziwa ukuthi akukho lutho olungakhulisa ngokomlingo ama-SEO akho ngobusuku obubodwa. Kunjalo nange-activating HTTPS kuwebhusayithi yakho. Akufanele ulindele ukuthi iwebhusayithi yakho ibe nokuma okungcono kumiphumela yekhasi le-injini yokusesha (i-SERP) ngokufaka nje isitifiketi se-SSL / TSL. Lapho isenzo sakho esiningi sihlangana isikhathi eside, ungaqala ukuvuna izinzuzo zazo.
Umdwebo 3 - Ngale ndlela iwebhusayithi engeyona ye-HTTPS ibukeka kabi kumsebenzisi
Isibonelo esihle esizokunikeza isithombe esicacile yilesi: cabanga ngewebhusayithi ye-TSL ebethelwe ye-Semalt kanye newebhusayithi engabhaliwe nenye i-ejensi yokuncintisana. Uma ufuna isihloko esifanelekile sokukhishwa kwedijithali, futhi la mawebhusayithi amabili ancintisana ngesikhundla esiphezulu, isayithi likaSemalt lizoba sezingeni eliphakeme. Ngani?
Ngoba uSemalt akagcini nje ngokuqukethwe okungcono, okuqukethwe okuphathelene naleso sihloko osifunayo kepha futhi kufakiwe nesitifiketi se-SSL. Ngendlela, kungenye yezinto izinto izinjini zokucinga ezizoyisebenzisa ukuqhathanisa imiphumela ehlukahlukene yombuzo.
Uma ufuna ukudonsa zonke izitobha ekucindezeleni iwebhusayithi yakho ngaphezulu kosesho lwe-organic, ukufaka isitifiketi se-SSL / TSL kungenye yezenzo ezilula. Okudingayo nje ukuthi uthenge isitifiketi ngokuya ngesidingo sakho, futhi ulungile.
Ungasifaka Kanjani Isitifiketi se-SSL nge-Semalt?
NgoSemalt, ukufaka isitifiketi se-SSL kuwebhusayithi yakho kulula njengokuthenga kwe-inthanethi. Ungaya ekhasini lethu lezitifiketi ze-SSL bese ukhetha kwelinye lamacebo amathathu. Kunjalo:
Okuyisisekelo - Ukufakwa kuphela, akunasitifiketi
Okujwayelekile - I-SSL evumayo kusuka ekufakweni kweComodo plus
I-premium - I-SSL Wildcard ethengiswa kakhulu yathengwa kakhulu ngamasizinda nokufakwa
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, uhlelo lwethu lwePrimiyamu lithandwa kakhulu kumakhasimende ethu akhona. Ibanikeza ukusetha okungenazinkinga ukuze bakwazi ukugxila emisebenzini ebaluleke kakhulu njengokuqukethwe kwewebhu nokuphathwa kwabasebenzisi.
Lapho usukhethe uhlelo olufanele, yenza ukuthenga ngesango lokukhokha ephephile nelondekile. Uma usuyithengile, ungahlanganisa kalula iwebhusayithi yakho nensizakalo yethu futhi wenze iwebhusayithi yakho iphephe. Uma kwenzeka ubhekana nezinkinga ngesigaba sokusetha, ukunakekelwa kwamakhasimende wethu kuzokuqondisa futhi uphendule imibuzo yakho.
Izitifiketi ze-SSL / TSL zikaSemalt zingakunikeza izinto eziyisihlanu ezibalulekile kuhambo lwakho lokuthengisa lwedijithali. Kunjalo:
Ukuphepha okuphezulu kwewebhusayithi yakho
Isimboli esheshayo evikelekile eliluhlaza ku-Google Chrome nakwezinye iziphequluli zewebhu
Ukuvikelwa kobumfihlo kwabasebenzisi bakho bewebhusayithi
Umthamo ophakeme wezivakashi ze-organic ezivela ezinjini zokucinga
Njengoba kuphawuliwe ngamaklayenti ethu amaningi edlule nawakukhona, ukufaka izitifiketi ze-SSL kungakusiza ukuthi uguqule iwebhusayithi yakho ibe yingosi yangasese abasebenzisi bakho abangayethemba futhi babhekane nayo njalo.
Ungavumeli abathengi abangahle bafulathele iwebhusayithi yakho ngemuva kokubuka uphawu 'olungaphephile' ku-Google Chrome. Bangenise nesitifiketi seSemalt SSL namuhla. Chofoza lapha ukuze uthenge eyodwa manje.